Fampahafantarana Lalàna: Any Ankazobe ny DERL
Published Date: 11 mars 2021
Mitohy ny ezaka fanatsarana ny asam-pitsarana eto Madagasikara. Anjaran’ny Distrikan’Ankazobe indray no misitraka ny fidinana ifotony ataon’ny avy eo anivon’ny Sampandraharahan’ny Fampahafantarana Lalàna (Service de la Vulgarisation Juridique) androany alakamisy 11 martsa 2021. Hetsika izay efa natomboka tamin’ny taon-dasa, karakarain’ny Foibem-pitondrana momba ny Fandinihana sy Fanavaozana Lalàna (Direction des Etudes et des Réformes Législatives) na DERL, eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Miaraka amin’ny fanohanan’ny PAJMA.
Tanjona ny fampahafantarana ny Lalàna laharana 2018-027 tamin’ny 08/02/19 momba ny fiankohonana sy ireo paikady ara-pitsarana mikasika izany.
Ny andro voalohany, dia nifantoka tamin’ireo fanovàna lehibe entin’ny Lalàna 2018-027, ireo karazana trangam-piankohonana sy ny adidin’ny Mpiandraikitra ny sora-piankohonana, ny fanaraha-maso ataon’ny Fampanoavana mikasika ny rejisitry ny fiankohonana, ary ny zaza tsy ampy taona manao heloka.
Ho an’ny rahampitso zoma 12 martsa 2021 kosa, dia hiompana amin’ny paikady heloka, ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana ary ny ady atao amin’ny herisetra mifototra amin’ny mahalahy na mahavavy, fantatry ny maro amin’ny hoe VBG.
Misitraka izao fidinana ifotony izao ireo Mpiandraikitra ny sora-piankohonana sy ireo Mpitantsoratry ny fiankohonana eo anivon’ireo kaominina 15 mandrafitra ny Distrikan’Ankazobe, ireo lehiben’ny Fokontany tsirairay ary ireo mpiasan’ny kaominina.
← Sekoly ENMG : tranonkala vaovao sy fanolorana ny plateforme E-learning
Fandraharana ny Fonja : Fampiakarana galona ireo Mpandraharahan’ny fonja eny Tsiafahy →